Laboratory Centrifuges Factory, Shirkado cusub | Shiinaha Laboratory Centrifuges-saareyaasha
Home » Products » Qalabka Laboratory » Centrifuges Laboratory
Bogsii Force xawaaraha sare ee centrifuge shakhsi Neofuge 13R bixiyaan saamayn culus ee aad u fiican iyo waa u fududahay in la isticmaalo iyadoo isku halaynta sare iyo ammaanka.
- 15000rpm xawaaraha ugu badan
- awoodda ugu badan 24 × 1.5 / 2.0ml, 16 × 5ml
- duwan Heerkulka -10 ℃ ~ 40 ℃
- ilaa ayna miiqdaan 16,000 rpm in 20.800 × g
- Max. awoodda 400ml
- drive Induction aan burush carbon
- matoorrada awood for lagu dhuftay xawaaraha iyo Fariin gaaban
- duwan Broad of adapters iyo accessories qaybsan
Bogsii Force Neofuge 18R centrifuge shaybaarka, bixinta saamayn culus ee aad u fiican oo si sahlan loo isticmaali kalsooni sare iyo ammaanka, hubkaas ayaa loo isticmaalaa in beerihii cilmi kelli iyo lagmamaarmaanna, iyo baadhitaankaaga caafimaad.
- laboratories caafimaad Small
- Kiimikada noole iyo cilmi-noolaha kelli
- Falanqaynta joogtada ah ee laboratories warshadaha
Bogsii Force Neofuge 1600R centrifuge shaybaarka benchtop dhigaya heerarka tayada, design, iyo hal-abuurka ka timaada dhaxal xagga sannado badan oo waayo-aragnimo. Neofuge 1600R ku xoojinaayo badnaan codsiga ay ka mid yihiin a-awood sare, centrifuge guud-Ujeeddada for goynta unug; centrifuge-xawaaraha sare ah kala lysates cell, iyo microcentrifuge ah roobabka DNA.
Soo bandhigtay, matoorrada dayactirka-free awood leh, Centrifuge Neofuge 23R caawinaysa dadka kala duwan ee rotors iyo dhigeeysa taarikada / tuubooyinka ka 0.2ml ilaa 4 × 180ml xowliga yar-to-sare for tiro balaadhan oo ah codsiyada.